Matory mihorirana amin'ny tany dia mitehina amin'ny kiho. Aforitra ny lohalika. Sady hatsotra ilay tongotra eo ambony no takarina amin'ny tanana dia averina aforitra ny lohalika sy ny tanana sady apaika amin'ilay lohalika ny kiho. Averina in-20 izay dia atao toy izany koa ny lafy ilany. Averina in-3
Toy ny manao "planche" na gainage ny paozy haingana eo. Atosika mankany aloha ny vatana ka ny lohan-tongotra sy ny kihon-tanana no manosika. Alefa mihemotra mankany aoriana avy eo ny vatana sady aforitra ny lohalika. Averina in-20 dia manao andiany 3. Sady mahafisaka kibo izy ity no mandrafitra ny fitombenana ihany koa.
Mitsilany amin'ny tany dia aforitra ny lohalika. Atsotra ny tanana. Akarina ny vatana sady alefa mifandimby eo afovoan'ny lohalika na amin'ny andaniny roa amin'ny lohalika ny tanana roa. Averina in-30 dia manao andiany 3.
Faranana amin'ity gainage ity ny fampihetseham-batana. Mitsilany amin'ny tany dia akarina ny vatana ka ny tanana roa atao mahitsy, ny lohalika no aforitra. Tazonina 1 minitra izao paozy izao. Averina in-telo. Isaorana coach Josy avy ao amin'ny Art Sport Fitness Andrefan’Ambohijanahary nanolotra ny fampihetseham-batana anio.